Dabinnada Sameeyaha Suuqa ee Ganacsi ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah | vfxAlert official blog
Astaamaha aasaasiga ikhtiyaariga ikhtiyaariga ah: dabin sameeyaha suuqa
Imisa jeer ayaad u maleysay inaad gebi ahaanba hubtay isbeddel isbeddel ah, ka dibna qaniinay xusulladaada, adigoo daawanaya dib-u-noqosho gebi ahaanba ka soo horjeedda? Immisa jeer illaa iyo markaa dib ayaad u eegtay fikradaha sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah ? Laakiin adigu khaladkaaga ma lihid. Dhibaatada oo dhami waxay ku jirtaa dabinnada ay kuwa suuqa ka sameeyaa noo dejiyeen si aan u dhaqaajino amarradooda sugaya ama aan u bannayno dhicitaankaaga. Maanta waxaan si kooban u eegi doonaa sida loo aqoonsado dabinka, waxa ay yihiin iyo sida loo isku dayo in lacag looga sameeyo. Aynu ku bilowno qeexitaanka.
“Dabin” waa daqiiqad marka ciyaartoy waaweyn ay isku dayaan inay ka dhaadhiciyaan inta badan kaqeybgalayaasha suuqa ee saxda ah ee ku dhaqaaqista been abuurka ah .
Aynu eegno sawirka hoose oo aan ka jawaabno su'aasha, meeday fursadda calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah ee ugu sarreeya? Waxaa jira qaabab wax qabad oo sicir ah oo gadaal aan gadaal ka bilaabmayn, laakiin dib u celin iyo sixitaan. Kaliya markii ay kuwa wax suuq galiya ay xidhaan amarada ay sugayaan ayay bilaabeen inay sameyaan kor u kac iyo hoos u dhac.
Burburka heerarku waa mid aad u muuqda, laakiin haddii aysan dhicin inta lagu jiro sii deynta wararka aasaasiga ah ee muhiimka ah waxayna dhacaan iyada oo aan la helin tijaabooyin hordhac ah iyo calaamadaha ganacsiga, waxaad u baahan tahay inaad fiiriso joogitaankooda waqtiga kale.
Waxaan ku eegaynaa Pin-Bar shaxda maalinlaha ah ee lammaanaha GBP / USD. Aynu u gudubno waqti yar oo ah falanqeyn faahfaahsan - bar pin ayaa sidoo kale lagu arkay H4 iyo H1.
U beddelashada waqtiga loo yaqaan 'M30' ka yar, waxaan aragnaa in uusan halkan ku oolin bar-baraha, runtiina, meeshan, dadka suuqa sameeya ayaa khiyaanayn jiray. Jaantusku wuxuu muujinayaa shumacyo joogto ah oo ka jabaya heerka qiimaha wareega ka dibna suuqa uu bilaabayo inuu rogo.
Waqtiyada sare, halkaasoo laga arki karo bar weyn oo biin leh oo ka soo kabanaya heer sare, ganacsatada khibradda leh ma furi doonaan xulashooyinka jihada jabitaanka. Laakiin marka la joogo M30, xaaladdu hadda sidii hore uma cadda - isku day lagu doonayo in lagu kala baxo dhowr shumacyo (taas oo lafteedu calaamad cad u ah dabin suurtagal ah), iyo ka dib jabsiga si loo furo ikhtiyaarka PUT, wax waliba waxay umuuqdaan kuwo hagaagsan. Newbies badanaa waxay ku dambeeyaan faafinta shabagyada, sidaa darteed ka taxaddar calaamadaha binary otomaatiga ah!
Noocyada ugu waaweyn ee dabinnada
Waxaan dhihi karnaa in dabinada badankood aysan waxba ka badneyn jabinta beenta ah ee heerarka qiimaha xoogan iyo khadadka taageerada / iska caabinta. Midka ugu horreeya wuxuu noqon doonaa qaabka shaxda ah ee loo yaqaan "Double Gottom / Double Top"
Kuwo badan oo bilaabay raadinta iyo ka shaqaynta labalaab dusha sare ama hoose waxay ogaadeen in korka labaad uu had iyo jeer waxoogaa ka sarreeyo kan hore, iyo kan hoose ee hoose, liddi ku ah, inyar ayuu ka hooseeyaa, inkasta oo tarjumaadda asalka ah ee qaabku u muuqato ilbiriqsi kor ka hooseeya kan hore, taas oo muujinaysa gaabis ku yimid dhaqdhaqaaqa suuqa. Laakiin dhab ahaantii, waa meesha ugu horeysa ee ugu badan ee ikhtiyaarrada yaryar ay ku yaalliin, kuwaas oo kuwa sameeya suuqyada ay "doortaan" istiraatiijiyadooda ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah si loo kordhiyo guud ahaan xisaabtanka oo loo rogo suuqa.
Sidaa darteed, dabinkani waa jabitaan inta lagu jiro sixitaanka maxalliga sare / hoose, ka dib markaa ganacsatada badankood ay filayaan isbeddel isbeddel ah, laakiin dhab ahaantii taasi ma dhacdo. Waxaan mar labaad idin xusuusineynaa in mabda'a caadiga ah ee falanqaynta farsamada, oo oranaya burburka ugu badnaan maxalliga ah ee hoos u dhaca macnaheedu yahay dhammaadkiisa, had iyo jeer ma shaqeynayo.
Muhiim: haddii uu jiro kala-goyn heer ah oo ka soo horjeeda isbeddel dheer, markaa markaa waxay u badan tahay, calaamadaha binary ee bilaashka ah inay been noqon doonaan. Haddii suuqu degto oo uu u dhaqaaqo dhinac dhinac ah, waa inaad u weecataa xulashooyinka kala duwan ee "Gudaha / Dibedda" ama, haddii kanaalku ballaadhan yahay, fur CALL / PUT markaad ka soo laabanayso xuduudihiisa .
Nooca xiga ee dabinka ayaa ku jira wararka. Xaalad la yaqaan - ka dib sii deynta xogta, sicirka wuxuu ku socdaa hal jiho oo leh xawaare aad u weyn, isagoo hoos u dhigaya heerar dhowr ah oo muhiim ah oo jidka ku jira, ka dibna isla xawaarahaas ayaa isweydaarsiga ku noqonaya barta bilowga. Sidaad u badan tahay inaad horey u fahamtay, si looga fogaado dabinka, waxaan u baahanahay inaan eegno waqtiyo yar yar, oo aan waqti sare aheyn oo aan waxba ka muuqan.
Haatan aan eegno dabinnada marka la furayo kalfadhiyada ganacsiga. Qof kastaa wuu ogyahay tusaalaha kalfadhiga Yurub, marka uu jiro hal dhaqdhaqaaq ka hor furitaanka London, furitaanka ka dib sida caadiga ah dib ayaa loo noqdaa mustaqbalkana qiimaha ayaa mar kale beddeli kara jihada. Xaqiiqadan waxaa adeegsada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah, sida "Qarax London" iyo wixii la mid ah. Xaqiiqdii, waxaan marlabaad haysanaa uruurin joogsiyo yar yar oo ay sameeyaan kuwa sameeya suuqa kadibna kaliya bilowga dhabta ah ee "runta" dhaqdhaqaaqa.
Si loo fahmo waxa dhabta ah ee dhacay, tusaalaha kore waxaan ku qasban nahay inaan u wareegno waqtiga ugu yar daqiiqada, halkaas oo ay suuqu ugu dhaqaaqdo "macquul". Waxaan aragnay sicirka oo kor u kacaya ka dibna si cad uga soo kabsanay heerka 1.21400.
Soo Koobid : marka uu jiro kala-bax heer kasta oo qiimo ah, ha ahaato heer, heer sare / hoose ama hoose / taageero xoog leh / iska caabin, waa inaan marka hore u qaadanno jabitaan been ah oo tani waa dabin sameeyaha suuqa ee ururinta dhicitaanka iyo ganacsiga tooska ah calaamadaha ciyaartooyda yaryar. In kasta oo aysan jirin wax xaqiijin ah oo ka imanaya tilmaamayaasha farsamada iyo qiime-jabka ka sarreeya ama ka hooseeya heerka, ma fureyno wax heshiisyo ah.
Si loo fahmo inuu dabin jiro iyo in kale, waxaa lagama maarmaan ah in la falanqeeyo dhowr waqti oo kooban. Isla marka burburka heerka qiimaha adag uu dhaco, u gudub waqtiyo yar yar si loo xaqiijiyo;
Calaamadda ugu horreysa ee soo noqoshada qiimaha, waxaan ku furaynaa ikhtiyaar dhicitaankiisa ugu yaraan 5-7 baararka, maadaama ay jiri karaan dhowr sicirro dheeri ah oo dheeri ah, oo had iyo jeer ku dhammaada qasaaro muddo macaamil gaaban. Ka shaqeynta inta lagu jiro dabinka waxay u baahan tahay inaad la kulanto oo aad tixgeliso astaamaha sida calaamadaha ay ugu shaqeeyaan ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh, marka ku-celcelinta ugu horreysa ee xisaabta demo;
Fur wax aan ka badnayn 5% lacagta dhigaalka ah;
Suurtagalnimada dib uga soo kabashada heerka ayaa had iyo jeer ka sarreysa jabitaankeeda.